अर्थमन्त्रीको प्रश्‍न : एउटा पुस्तकमा ३०/४०% नाफा खाने, १०% कर तिर्न नमान्‍ने ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार
अर्थमन्त्रीको प्रश्‍न : एउटा पुस्तकमा ३०/४०% नाफा खाने, १०% कर तिर्न नमान्‍ने ?
काठमाडौँ — अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री युवराज खतिवडाले पुस्तकको कारोबार व्यापार नै भएकाले यसमा सरकारले कर उठाउने कुरा जायज भएको बताएका छन् ।
सरकारका प्रवक्ता रहेका मन्त्री खतिवडाले बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा स्वदेशी प्रेस तथा छापाखानाको संरक्षणका लागि विदेशबाट आयातित पुस्तकमा कर लगाउने निर्णय गरिएको बताए । अरु देशहरुमा पुस्तकमा १८ प्रतिशतसम्म कर लगाउने गरिएको उदाहरण दिँदै मन्त्री खतिवडाले भने, ‘धेरै देशमा पुस्तकमा १८ प्रतिशतसम्म कर लगाउने गरेका छन् । हाम्रो देशमा अरबौँ रुपैयाँ लगानी गरेर प्रेस र छापाखाना स्थापना गरिएको छ । उनीहरुले मेसिन र कागज दुवैमा कर तिर्नुपर्छ । करै नतिरी ल्याउने पुस्तकसँग उनीहरुले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ?’
करै नलाग्ने भएपछि पुस्तकमा जथाभावी मूल्य राखेर पनि बिक्रीवितरण भएको खतिवडाले बताए । उनले भने, ‘पुस्तकको व्यापार व्यापार नै हो, ज्ञानको व्यापार हुँदैन ज्ञानको त आदानप्रदान हुन्छ । ज्ञानको व्यापार भनेर दिग्भ्रमित पार्ने काम नगरौँ ।’
पुस्तक विक्रेताको प्रश्न : नाकामा रोकियो पुस्तक, सरकारले गर्न खोजेको के ?
एउटा पुस्तकमा ३०–४० प्रतिशत नाफा खाने तर सरकारलाई १० प्रतिशत कर दिन नमान्ने प्रवृत्ति गलत भएको पनि खतिवडाले बताए । उनले भने, ‘नाफामा कर लगाइएको हो, ज्ञानमा कर लगाइएको होइन । व्यापार गरेर नाफा धेरै कमाएपछि कर उठाइन्छ । कर लगाएपछि पुस्तक नै बिकेनन् भनेर हल्ला गरिएको छ । कर छलेर ल्याएको पुस्तक समात्दा ज्ञान पक्रिइयो भन्ने गरिएको छ ।’
सरकारले आयातित किताबमाथि १० प्रतिशत कर लगाउने निर्णय गरेपछि ज्ञानमाथि अंकुश लगाउने कदम भएको बताउँदै ‘मेक बुक्स ट्याक्सफ्री’ अभियान नै चलाइएको छ । पाटन दरबारस्क्वायरमा दैनिक रुपमा विभिन्न क्षेत्रका अगुवा गएर अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाइरहेका छन् ।
प्रकाशित : फाल्गुन १५, २०७६ १५:४९
सरकारको कामको समीक्षा गर्ने बेला भयो : नेपाल
काठमाडौँ — सत्तारुढ नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पार्टी र सरकारको समीक्षा गर्नुपर्ने बेला भएको बताएका छन् । काठमाडौंमा आयोजित वागमती प्रदेश कमिटीको राजनैतिक प्रशिक्षण तथा भेला कार्यक्रममा उनले नेकपाको सरकारबाट जनता खुसी भए नभएकोबारेमा समीक्षा गर्नुपर्ने बेला भएको बताएका हुन् ।
'हाम्रो पार्टी र सरकारको कामबाट जनता खुसी छन् कि छैनन् भन्‍ने समीक्षा गर्ने बेला भएको छ,' उनले भने, ‘नेतृत्वले आलोचना सुन्‍न सक्‍नुपर्छ । नेताहरू आपसमा लड्‍नुपर्ने अवस्था छैन ।'
पार्टी एकता नभएको भए नेकपा सरकारमा नहुने र पछारिने अवस्थामा रहेको नेपालको भनाइ थियो । 'नेताहरू आपसमा लड्‍नुपर्ने छैन । अलगअलग हुन्थ्यौं भने हामी पछारिने थियौं,' उनले भने ।
पार्टी एकता भएको दुई वर्ष बित्दा पनि एकीकरण नटुंगिएकोमा उनको असन्तुष्टि थियो । उनको भनाइ थियो, '२ वर्ष बित्दा पनि एकीकरणका काम टुंगिन सकेनन् । यो विलम्ब भयो । छिटो टुंग्याऔँ र विधिसम्मत टुंग्याउनुपर्छ ।’
जनताले दिएको मतमा पार्टी नेताहरूले दम्भ देखाउन नहुने नेता नेपालको सुझाव थियो । उनले भने, 'दुई तिहाइको नजिक पुग्यौं भनेर हामीले दम्भ देखाउन हुन्‍न । जनताको विश्वास जित्‍न काम र व्यवहार देखाउनुपर्छ । अब हामी गुनासो गर्ने ठाउँमा छैनौं । काम गर्ने ठाउँमा छौं । राज्यस्रोत हाम्रो हातमा छ त्यसलाई सही सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।'
नेकपाभित्र पछिल्लो समय विवाद बढेको सतहमा देखिएको छ । पार्टी र सरकार संचालनलाई लिएर सचिवालयमा विवाद देखिएको हो । त्यतर्फ संकेत गर्दै नेता नेपालले कार्यकर्ताहरूलाई भने, 'पार्टीमा समस्या देखेर आत्तिनु पर्दैन । पार्टीभित्र अनेक चिज हुनसक्छन् । पार्टीका सबै नेताले एकताबद्ध भएर जाने संकल्प लिनुभएको छ । त्यही भएर हामी यहाँ आएका हौँ ।’
प्रकाशित : फाल्गुन १५, २०७६ १५:२९